अन्तरबार्ता – Selfie Khabar
‘नयाँ गीतको तयारीमा छु’
नेपाली संगीत उद्योगमा देखीएका धेरे गायक गायीकाहरुको भिडमा एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको नाम हो षडज सम्वाहाम्फे । उनको नाम भित्रै संगीत लुकेको छ । शास्त्रीय संगीतमा सारेगमपधनिसा को पहिलो सा लाई षडज भनिन्छ । आफ्नै शब्द, संगीत र स्वरमा ‘पीरतीले होइन हजुर’ गीत गाएर चर्चामा आएका उनी धेरै श्रोताहरुको रोजाईमा परेका छन् । सुमधुर आवाजका धनी षडजले दर्जनौ गीतहरुमा आवाज भरेका छन । रमाईलो शैलीका गीतहरु गाउन रुचाउने षडजको अर्को गीत ‘होनी रेशम हो रेशम’ले पनी उनलाई थप चिनायो । षडजले (why…)र ( Why Reloaded) गरी दुई एल्वम बजारमा ल्याएका छन । पाँचथरको नवमी डाँडा स्थायी घर भएका उनी पढाईको शिलशिलामा २०५४ सालमा राजधानी...
‘म सबैकी डार्लिङ हुँ’-कमला सापकोटा ||
गीत संगीतको क्षेत्रमा झापालीहरुको सहभागीता निकै देख्न सकिन्छ । कोही सफल र कोही असफल हुनु त स्वभाविक छ । तर धेरै झापाली कलाकर्मीहरु मेहनति छन भन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो समय गायन र बेली डान्सबाट चर्चामा आएकी कमला सापकोटा ‘डार्लीङ’ झापाको गरामनि २ की बासिन्दा हुन । संगीतमा लागे पछि राजधानि केन्द्रित हुने कलाकारहरु प्राए सबै अहिलै उतै भेटिन्छन । करिब एक दशक अघि रियाज म्युजिकले बजारमा ल्याएको गणेश घिमिरेको शब्द,नारायण सुबेदीको संगीतमा रहेको ‘चाहेर पनि देखिन्न मनको तस्बिर’बोलको गीतबाट संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी गायिका कमलाका दर्जनौ गीतहरु बजारमा चर्चित छन । एक वर्ष अघि ‘छम्मा छम्मा’बोलको हट पप सङ्...
पण्डितले कर्मकाण्ड छोडेर पुराण मात्रै भन्छु भनेपनी ॐ त भन्नै पर्छ नि हैनर ? (बोकेदाह्रीसंग गरीएको कुराकानी )
‘बोकेदाह्री’यो नाम जो कोहीले सुनेको एउटा परिचित नाम हो । पुर्वको झापा अर्थात मोफसलमा रहेर पनि गीत संगीत तथा कलाकारीता क्षेत्रमा क्रियाशिल देखीएका श्रीकृष्ण लुईटेल २०३३ सालमा मोरङ्मा जन्मिएका हुन । ‘बोकेदाह्री’ले केही समय अघि मात्रै बाह्रौ एल्वम ‘बब्लु’लिएर बजारमा आएका छन । एल्वममा ‘नलगाउ छोटा कपडा’ ‘कलियुगको धर्म’ ‘डल्ले कि बहिनी’ ‘बाख्रा स्टायल’ लगायतका गीतहरु समाबेस गरीएको छ । यी गीतको म्युजिक भिडियोहरुलाई मिडिया हबबाट सार्वजनिक गरीएको हो । म्युजिक भिडियोलाई दर्शक श्रोताहरुले धेरै मन पराएको निमार्ण पक्षले सेल्फी खबरलाई जानकारी दिएको छ । प्रस्तुत छ धेरै दर्शक श्रोताको मन जित्न सफल गायक तथा कल...
“सबै खालका गीत गाउन रुचाउँछु” – गायक पदम आचार्य ||
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा गायक गायीकाको संख्या धेरै भए पनि राम्रो गायकको रुपमा ख्याती कमाएकाहरु बिरलै भेटिन्छन । त्यही भिडमा रहेर संर्घष गर्दै गरेका एक जना गायक हुन पदम आचार्य । सुमधुर आवाजका धनी पदम आचार्यको आवाजमा रहेको आधुनिक गीत ‘क्या दामी’केही दिन अघि सार्वजनिक भएको छ । संगीतकार राम सिटौलाको शब्द संगीतमा रहेको यो गितको म्युजीक भिडियोले यो हप्ता संगीत बजारमा राम्रो चर्चा कमायो । भिडियोमा नायीका केकी अधिकारी र मोडल बिनोद न्यौपानेले अभिनय गरेका छन । म्युजिक भिडियोलाई बिशाल भण्डारीले निर्देशन गरेका हुन । सिद्वीथुम्का ८ इलाम स्थायी घर भएका पदमले काठमाण्डौमा रहेर गुरु गुरुदेब कामत र राम सिटौलास...
“चलचित्रमा गीत गाउने ठुलो सपना थियो” – गायक टंक बुढाथोकी ||
नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा झापालीहरुको पहिचान कम छैन । प्रमोद खरेल,हिमाल सागर, जुना प्रसाई, टिका प्रसाई, कमल रसाईली लगायत यसका उदाहरण हुन । पछिल्लो समय टंक बुढाथोकीले बजार तताईरहेका छन ।‘काली तिम्रो नजरले’ ‘घण्टी बज्यो’ ‘मन परनउँछु तिमीलाई’ ‘तिमी नाइन्टी इयरकी ब्युटि’जस्ता दर्जर्नौ गीतहरु उनका चर्चामा रहेका छन । हिजो आज नेपाली फिल्म ‘ड्राईभर दाई’को जस्ट स्लोली बजो मेरो मनको गितार पनि निकै चर्चामा रहेको छ । उनी गायक मात्र होइनन एउटा राम्रो संगीतकार,एरेञ्जर अनि ‘स्टुडीयो नाइन’का सञ्चालक समेत हुन । बुढाथोकीको संगीतमा मेलीना राईको आवाजमा रहेको गीत ‘तिमीले बाटो फेर्यौ अरे’निकै चर्चामा रहेको छ । झ...
‘माया बाँच्ने आधार हो ’ – योजना पुरी
गायीका योजना पुरी नेपाली संगीत उद्योगकी चिरपरिचित गायीका हुन । सुमधुर आवाजकी धनी योजनाको वास्तविक नाम भने यामकुमारी पुरी हो । उनी हरेक अफिसियल कामहरुमा यामकुमारी नै भनेर परिचित गराउँछीन । मोरङ्गको राजघाट घर भएकी योजना पढाईका लागी प्रबेश गरेपछी उनले सांगीतिक क्षेत्रमा पनि हात हालिन । यो क्षेत्रमा आज उनको नाम परिचित छ । उनी संग गायनको मात्र होइन सञ्चारक्षेत्रको पनि ज्ञान छ । उनले कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा एस टेलिभिजन,नेपालवानी एफएम,रेडियो अडियो लगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काम गरेकीछन । उनले अब चाँडै अर्को नयाँ मिडियाबाट श्रोता सम्म आईपुग्ने बताइन । २०६३ सालमा कमला खनालको शब्द संगीतमा ...
संगीतबाट पैसा भन्दा पनि आत्मसन्तुष्टी पाएको छु -दिपेन याक्थुङ्गवा||
गायक दिपेन याक्थुङ्गवाले आफ्नो दोश्रो एल्वम ‘सेल्फीस’ लिएर बजारमा आएका छन् । नयाँ एल्वम ‘सेल्फीस’ भित्र रातो साडिमा, तिमी बसेको डाँडा, लगायत देश प्रेम पोखीएको ‘एक सरो लुगा मेरो देश’ गरी छ वटा मिठा गित समावेश गरीएको छ । गीतकार शिव शंकर थापा , श्याम शुन्दर लावतीको शब्द पनि एल्वम भित्र समेटीएको छ । यस अघि पहिलो एल्वम ‘एसएमएस’ बाट राम्रो चर्चा बटुलेका दिपेनको गायनमा मात्र होइन संगीतमा पनि राम्रो दखल दखीन्छ । दिपेनले संगीत भरेकोे ‘तिमीले मलाई किन किन’ बोलको गीतले राम्रो चर्चा कमाइसकेको छ यसमा आवाज भने गायक तारा लक्समले भरेका छन् । सेल्फिस (स्वार्थी) भित्र रहेका प्राय सबै गीतहरुमा उन्कै संगीत रहेको...
गीत गाउनाले हाँस्य कलाकार बनायो – सुजित थापा
नेपाली हाँस्य टेलिफिल्ममा चर्चित नाममध्येका एउटा नाम हो, सुजित थापा । नेपाली हाँस्य टेलिश्रृंखला भद्रगोलमा “भान्दाई मैले बुझे” भन्दै दर्शकका मन जित्न सफल उनै माने हुन् सुजित थापा । नेपाली जनतालाई हसाउने कार्यमा लागेका उनै थापा अचेल दमन रुपाखेती निर्दे्शित हाक्का हाक्की नामक हाँस्य टेलिश्रृंखलामा दुई चरित्रमा देखा परेका छन् । यसअघि घरपेटी बा, सिस्नुपानी झ्याम्मै, भद्रगोल लगायतका विभिन्न हाँस्य टेलिश्रृंखलामा उनले आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ सुजित थापासँग गरीएको कुराकानी आजकाल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ? – आजभोली हाक्का हाक्कीका साथै आफ्नै व्यक्तिगत काममा नै व्यस्त छु । यो क्...
सानै देखि गायक बन्ने सपना थियो ||
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा एउटा राम्रो पहिचान बनाएका गायक हुन तारा लक्सम । झापाको शिबगञ्ज ब्याङ्ग डाँडामा जन्मिएका ताराले अहिले काठमाण्डौलाई कर्मथलो बनाएका छन । सानै देखी गित गाउन भनेपछी साह्रै सोखिन उनले पढाई विग्रने डरले एस.एल.सी पास गरेपछी मात्र संगितमा हात हालेको बताउँछन् । २०६०सालमा भएको पहिलो नेपाली तारा सिजन १ मा टप२० सम्म पुगेका उनले अथक मेहनत र प्रयास पछी फेरी २०६४ मा भएको नेपाली तारा सिजन २ मा फस्ट रनर अप बने । उनले अहिले सम्ममा माया ‘छ्यास्छ्यास्ती’ ,‘मखमली चोली’ र ‘बल्छी’ गरी तिन वटा एल्वम बजारमा ल्याएका छन । गोप्य नाता नगाास्नु है , तिम्ले मलाई किन किन लगायतका दर्जनौ गीतहरु उनका...
गायक बुद्धीराज राईसंग कमल धिमालले गर्नुभएको कुराकानी ।
नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीको रुपमा नेपालमा लामो समय शिविरमा जिवन विताएका गायक राई अहिले तेश्रो मुलुक अमेरीकामा बसोवास गर्दै आउनु भएको छ । अमेरिका बस्दै आउनुभएका सहकर्मी धिमालले थुप्रै कार्यक्रमहरु पस्कदै आउनुभएको छ । यसपटक गायक राइसंगको भलाकुसारी तल लिंक मा उपलब्द छ । https://www.youtube.com/watch?v=3MNumcttmJ0&feature=youtu.be...